Fri, 16 Nov 2018 13:03
Tue, 13 Nov 2018 13:13
Sun, 29 Jul 2018 13:44
Sat, 07 Jul 2018 15:19
Sun, 24 Jun 2018 15:24
Zimbabwe police says 49 people injured in Saturday's blast at president's rally
HARARE - Zimbabwe police said on Sunday 49 people were injured in the explosion at President Emmerson Mnangagwa’s a political rally on Saturday, with the number expected to change.
Sat, 09 Jun 2018 15:04
HARARE - Zimbabwe’s main opposition party promised on Thursday to revive the economy if it wins an election in July by cutting taxes, abolishing a quasi-currency “bond note”, joining a regional monetary union and seeking debt relief.
Sun, 29 Apr 2018 14:54
HARARE - Zimbabweans can now apply for licences to grow cannabis for medical and research purposes, the government has said in a legal notice, making the southern African nation the second country in Africa to legalise cultivation of the plant.
Fri, 13 Apr 2018 12:42
HARARE - Zimbabwe is looking to sell shares in 35 state-owned firms, including telecoms and mining entities in the latest step to revive the economy under new political leadership, Finance Minister Patrick Chinamasa said on Friday.
Sun, 18 Mar 2018 14:52
HARARE - Zimbabwe’s first presidential and parliamentary elections since the end of former strongman Robert Mugabe’s long rule will take place in July, President Emmerson Mnangagwa said on Saturday.